उ र मेरो दोष ! - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
उ र मेरो दोष !
- राजिव घिमिरे
‘भाउजु, Company चाहिन्छ भने भनौं है ।’
कोठा यता उता हेरेको, सबै कुरा आफ्नै ठाउँमा थिए । टेबलमा प्रकाश र मेरो बिहेको फोटो त्यसरि नै बसेको थियो । टेबल क्लथको फुल फुलेकै थियो । प्रकाशले जितेका मेडल र मैले जोहो गरेका सजावट सोकेशमा सजिएका नै थिए । भित्ता मा सजाएकि जेसिका अल्बा हासेकै थिइन् । तर म भने, कता कता अर्कै भएकि थिए । कुनै युद्धबाट न जित न हार का साथ फर्केको योद्धा जस्ति । न गर्व आफु सित, न अथाह ग्लानि ।
निकै बेर चुप चाप रोए, आफै संग । उ प्रकाशको स्कुल देखिको साथी । हाम्रो बिहे पछि, काठमाण्डौ आएर, उसलाई भनेर बिशेष रुपमा खाना लाई बोलाएका थियौ । हासि, रहने । मजाकिया मान्छे । प्रकाशको साथी, म पनि उ संग comfortable भएर नै कुरा गर्थे । प्रायः जसो हाम्रो मा आई रहन्थ्यो । कहिले खालि हात त कहिले के लिएर ।
‘भाउजु, मलाई तपाईकि बहिनि छन् भने मिलाई दिनु न ।‘ उसको बिहेको कुरा सुरु गर्यो कि भनि हाल्थो । उ छिट्टै बिहे गर्ने तरखरमा थियो । प्रकाश उलाई सधै जिस्काईरहन्थ्यो । उ हाम्रो परिवारकै जस्तो भएको थियो । हुन पनि, काठमाण्डौमा आफन्त नभएकाले होला, उ नै आफन्त जस्तो थियो ।
‘चितवन जान्छौ त ?’ वहांले नसोध्नु भएको पनि होईन । माईत जान पनि मन लागेन । किन किन मलाई यहि डेरा आफ्नो लाग्छ ।
‘यसो भाउजुलाई साह्रो गाह्रो पर्ला, कहिले काहिं आईदे है !’
उ पनि भान्सामा नै बस्यो । म हस्याङ फस्याङ गरि रहेकि थिए । उ पछाडि डाईनिंङ कुर्सीमा बसेको थियो । हाम्रो भान्सा सांघुरो छ । काम गर्न यता उता गर्दा उसलाई छोई रहन्थ्यो । झन, त्यो डाईनिङ नि पल्लो छेउमा राखेको लसुन लिन लम्कदा, उसलाई मज्जाले छोईयो, मेरो छातिले । मेरो होसै भएन । उ आफै उठ्यो । मलाई अफ्ठ्यारो लाग्यो ।
‘अनि भाउजु कि बहिनिहरु भेट्टिनन् ? म त बहिनिहरु पनि आउलान जस्तो लागेको थियो, आज ।’ उ अझै मजाक मा थियो ।
‘specification दिनु पर्यो नि, कति सम्म कालि चल्छ, कति सम्म मोटि चल्छ ?’ म भन्दै थिए ।
‘तपाई कै photocopy गरेर दिनु न spec.।’ उ सधै यसरि नै छेड हान्थ्यो ।
‘अब, राम्रो भए ?’
‘सबथोक रेडि ?’
‘भाउजु, चाहिन्छ भने भनौं है ।“
साहित्यसंग्रह डट कमबाट
1385 पटक पढिएको